Accueil > Gazetin'ny nosy > Hery Rajaonarimampianina: Miverina filoha raha tsy tafakatra amin’ny fiodinana faharoa
Hery Rajaonarimampianina: Miverina filoha raha tsy tafakatra amin’ny fiodinana faharoa
Hisokatra androany ary haharitra 12 andro ny fivoriana tsy ara-potoana ho an’ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona. Misongadina mandritra ity fivoriana tsy ara-potoana ity ny fandinihana sy ny fandaniana ilay lalàm-pifidianana vaovao izay novolavolain’ny governemanta. Saika miandry ity lalàm-pifidianana vaovao ity avokoa ny mpanao politika sy ny mpanara-baovao satria tao anatin’ny herinandro vitsy dia betsaka ny resaka mandeha etsy sy eroa mikasika momba ity lalàna ity. Tao anatin’ny herinandro teo izay dia nandeha ny siosion-dresaka fa misy ny andininy izay mamaritra ny taonan’ny kandida afaka mirotsaka ho fidiana ka ny 45 taona no mihoatra hatramin’ny 67 taona ihany no afaka hilatsaka. Ho hita eo moa ny tena fahamarinan’izay siosion-dresaka mandeha izay fa raha ny loharanom-baovao maripototra dia fantatra fa misy ny andinin-dalàna mikasika ny fametram-pialàn’ny filoham-pirenena ao anatin’ity lalàm-pifidianana vaovao ho haroso eny amin’ny parlemanta ity. Fantatra araka ny loharanom-baovao tsy nasiam-panitsiana ny fe-potoana hametrahan’ny filoham-pirenena am-perinasa ny fametram-pialany raha toa ka hilatsaka ho fidiana, izany hoe mijanona 60 andro mialohan’ny fanokafan’ny fampielezan-kevitra. Ny andinin-dalàna vaovao nampidirin’ny governemanta kosa dia ny hoe: “aorianan’ny fivoahan’ny vokatra ofisialy ny fiodinana fiodinana voalohany, ny ampitson’io andro io ihany dia afaka miverina eo amin’ny toeran’ny maha filoham-panjakana azy ny filoha raha tsy tafakatra amin’ny fiodinana faharoa”. Midika izany fa raha tsy tafakatra amin’ny fiodinana faharoa i Hery Rajaonarimampianina dia afaka miverina filoham-pirenena ary manana ny fahefana feno izay omen’ny lalàm-panorenana azy. Sambany no nisy lalàna tahaka izany teto amintsika sy manerana izao tontolo izao. Raha ny fanazavana nomen’ny mpahay lalàna iray dia tsy lojika mihitsy ary manitsakitsaka ny foto-kevitra hijoroan’ny tany tan-dalàna izany lalàna tadiavin’ny fitondrana HVM hapetraka eto amin’ny firenena izany. Raha vao nametram-pialàna mantsy ny filoham ka nankatoavin’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana dia tsy tokony hiverina handray ny toeran’ny filoham-pirenena intsony. Sady mazava tsara ny voalazan’ny lalàm-panorenan’ny repoblika faha 4 fa mametram-pialàna ny filoham-pirenena raha toa hilatsaka ho fidiana amin’ny fifidianana. Mety ho zavatra indray mantsy raha toa ka milaza ny lalàm-panorenana fa miantona aloha ny maha filohan’ny repoblika an’ilay filoha milatsaka ho fidiana. Mazava ary miharihary toy ny vay an-kandrina izany fa tetika maloto entin’ny HVM indray izao lalàna vaovao hampidirina ao anaty lalàm-pifidianana izao. Ny fanapahan-kevitra ho raisin’ny solombavam-bahoaka sy ny loholona moa no andrasana, hankatoa izany lalàna izany sa tsia? Raha ny fahafantarana ny isan’ireo parlemantera izay manohana sy miara-dia amin’ny fitondrana dia azo antoka fa tsy maintsy ho lany io lalàna io.
Ivato : dibo-drano ny seranam-piaramanidina
Tranga tsy dia fahita firy no niseho teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ny alin’ny sabotsy hifoha alahady teo. Rehefa nikija nandritra ny ora maromaro ny orana dia tafiditry ny rano tao anatin’ny seranam-piaramanidina izay niteraka fanelingelenana ho an’ireo mpandeha. Saika dibo-drano avokoa ny faritra ny rehetra tao anatin’ny seranam-piaramanidina, na taty amin’ny fidirana ho an’ireo mpandeha vao handray fiaramanidina, na tao amin’ny faritra hidiran’ireo mpandeha vao migadona eny Ivato. Ny mahagaga dia tsy vao sambany no nisy oram-be mivatravatra toy ireny tamin’ny sabotsy alina ireny teto Andrenivohitra saingy tsy dibo-drano tahaka izao ny seranam-piaramanidina Ivato raha tsy tamin’ity indray mitoraka ity. Henatra ho an’i Madagasikara moa ny trangan-javatra toy izao satria manana ny fenitra iraisam-pirenena ny seranam-piaramanidina Ivato kanefa dibo-drano. Marihana fa betsaka tamin’ireo mpandeha no voatery nanala kiraro, na ny Malagasy na ny teratany vahiny.